အောင်မြင်တဲ့ Joint Venture တစ်ခုဘယ်လို ဖန်းတီးကြမလဲ…
1. Joint Venture လုပ်ဖို့လိုအပ်သလား စစဉ်းစားပါ…
ပုံမှန်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လည်ပတ်နေစဉ်မှာ Joint Venture လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အနေအထား တစ်ခုကို အချိန်ကာလ တစ်ခုမှာ ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ အားနည်းတဲ့ နည်းပညာ လိုအပ်တာမျိုး၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလိုလာတာမျိုး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာမှာ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အကြံအညာဏ်လိုလာတာမျိုး စသည်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်များစွာရှိလာနိုင်ပါတယ်…
ဥပမာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ထုတ်ကုန်အသစ်အတွက် သုတေသနလုပ်တယ်၊ ထုတ်ကုန်သစ်ထုတ်တယ် သို့သော်လည်း ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးဖို့ Marketing တို့ Distribution တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လိုအပ်တဲ့ လူအင်အား၊ အသုံးအဆောင်အင်အား၊ ကျွမ်းကျင်မှု စသည်တို့လုံလောက်အောင်မရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာ အဆိုပါအလုပ်တွေအတွက် Resources ရှိတဲ့လုပ်ငန်းများ၊ တစ်သီးပုဂလတို့နှင့် Joint Venture လုပ်ဖို့ရန်အတွက် အခြေအနေကို မဖြစ်မနေ စဉ်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်…
နောက်တစ်ခု လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ (သို့) ဈေးကွက်အတွင်းအင်အားကြီး တဲ့ လုပ်ငန်းအဖြစ်ရပ်တည်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာ အသာစီးရလိုတဲ့အနေအထားများမှာလည်း မိမိနှင့်လုပ်ငန်းတူတွေနဲ့ Joint Venture လုပ်ဖို့လာကြတက်ပါတယ်…
2. ယထာဘူတကျသော ရည်ရည်ချက်ကို သတ်မှတ်ပါ…
Joint Venture လုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုရပြီးပြီဆိုရင် မိမိလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လက်တွေဆန်သော စည်းကမ်းချက်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချမှတ်ပါ။ ကိုယ်ဖြစ်လိုသော Joint Venture အမျိုးအစားနဲ့ဖြစ်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ကို မြင်အောင်စိတ်ထဲမှာ ပုံဖော်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်ချမှတ်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ Joint Venture လုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ သူများ (ကုမ္ပဏီများ) ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်သော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Joint Venture လုပ်လိုတဲ့ စိတ်ကူး စိတ်သန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးရင် ဖြစ်ထွန်းလာနိုင်တဲ့ အလားအလာများအား ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားများတင်ပြနိုင်ခြင်းဖြင့် လက်တွေ့ဆန်တဲ့ လုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
3. အလားအလာရှိသော Joint Venture Partner ဖြစ်နိုင်ချေရှိသူများအား ရှာဖွေပါ။
အလားအလာရှိတဲ့ Partner မျိုး ရှာဖွေတွေ့ရန်အတွက် Business အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဆိုင်သော Networking Event များဟာ အသုံးတည့်သော နည်းလမ်းများဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်၌ ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်နေသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း အစရှိသော နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး မိမိလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်နေသော ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာအစရှိသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသော Partnership များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
4. တခြားသော Company များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ဟောပြောပွဲများ၊ တွေ့ဆုံပွဲများ၊ ညစာစားပွဲများ အစရှိသော ပွဲလမ်းသဘင်များကို တက်ရောက်မှုဖြင့် မိမိ လုပ်ငန်း (စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် Strategic Partner များကို ရှာနိုင်ပြီး၊ အလာူအလာရှိသော Joint Venture Partner ဖြစ်လာနိုင်သူများနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကမ်းလှန်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
5. နောက်ဆက်တွဲ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း
Networking Event များသည် လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းနှင့် informal တွေ့ဆုံခြင်းများ၊ လိပ်စာကဒ်များ အလဲအလှယ်ပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် အဆိုပါ တွေဆုံပြီးသူများအထဲမှ Joint Venture Partner ဖြစ်လာရန် အလားအလာရှိသူများ နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အစည်းအဝေးများ စီစဉ်ပြီး အသေးစိတ်ဆွေး နွေးခြင်းများ၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများ၊ ကမ်းလှမ်းခြင်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင် မည်ဖြစ်ပါတယ်။
6. အလားအလာရှိသော company နှစ်ခုအား Joint Venture အတွက် အကဲဖြတ်ခြင်း
အောင်မြင်သော Joint Venture တစ်ခုဆိုတာ လုပ်ရမည့် အလုပ်တစ်ခုကို ပြီးမြောက်အောင် အဆုံးသတ်လိုခြင်းထက် ဘယ် company က မိမိ လုပ်ငန်းနှင့် ပိုလိုက်ဖက်ပြီး အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နိုင်သလဲဆို သော အချက်အား အောက်ပါ အကြောင်းအရာများပေါ် မူတည်ပြီး စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
Company နှစ်ခုလုံး၏ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံဟာ မိမိ လုပ်ငန်းနှင့် သဟဇာတ ဖြစ်၊ မဖြစ်။
သက်ဆိုင်ရာ company နှစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်နေသူများ အနေဖြင့်၊ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိသော Joint Venture အား လက်ခံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်မှု၊ အားပေး ထောက်ခံမှု။
Company နှစ်ခုဟာ အတိအကျ မတူသော်လည်း ဆင်တူယိုးမှား ရှိပါက၊ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိသော Joint Venture အား ပိုပြီး အောင်မြင်ရန် အလားအလာရှိသော အခြေအနေကို အလေးထား အကဲဖြတ်ခြင်း။
Company နှစ်ခုလုံး၏ ငွေကြေးတောင့်တင်းမှုဟာ ပြုလုပ်မည့် Joint Venture အတွက် လုံလောက်အား ကောင်းသလားဟု စစ်ဆေးခြင်း။
Company နှစ်ခုဟာ အတူတကွ ပူးပေါင်းပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းရန်၊ တစ်ခု အပေါ် တစ်ခု ယုံကြည်မှု ခိုင်မာခြင်းအား ဆန်းစစ်ခြင်း။
7. လျှို့ဝှက်ချက် အတွက် သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း
Joint Venture တစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင် company နှစ်ခုလုံးမှ တစ်ခုကို တစ်ခု ပွင့်လင်းမြင်သာ ဆက်ဆံဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အချို့အချို့များ၌ လျှို့ဝှက်စွာထားသင့်သော သတင်းအချက်အလက်များအားဆွေးနွေးခြင်၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ လေ့လာခြင်းများ အပြန်အလှန် လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာရာ၊ သက်ဆိုင်ရာ Joint Venture မစတင်မှီ လျှို့ဝှက်ချက်အတွက် သဘောတူညီချက် (Non-Disclosure of Confidential Agreement) များ အပြန်အလှန် ချုပ်ဆိုထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ company တစ်ခုချင်းစီနှင့် သက်ဆိုင်သော အရေးကြီးအချက်အလက်များအား Joint Venture လုပ်ငန်းနှင့် မဆိုင်သော တခြားသူများကို အသိပေးခြင်းမျိုးတွေ၊ ဖွင့်ပြောခြင်းမျိုးတွေ မရှိရအောင် ကာကွယ်ဖို့ပါပဲ။
8. သဘောတူညီချက် ရယူခြင်း။
ဤအဆင့်ကတော့aletter of Intent ကို သဘောတူကြဖို့ပါပဲ။ Letter of Intent ဆိုတာကတော့ တရားဝင် Joint Venture Agreement ရဲ့ ရှေးပြေးသဘောတူညီချက် ပါပဲ။ သူကတော့ Joint Venture ရဲ့ယေဘူယျ သဘောတူ ညီ ချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ ကိုဖော်ပြကြမယ်၊ နောက်ဆုံး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူ ရန်လိုတဲ့ အကြောင်း အရာများ ပါမယ်၊ သူကတော့တရားဝင်ချည် နှောင်တဲ့ပုံစံမျိုး (Binding Agreement) or (Non-Binding Agreement) လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
•	Binding Agreement ဆိုရင်တော့ Joint Venture မှာ ညှိနှိုင်းထားတဲ့ တစ်ဘက်ချင်းစီ မှ လိုက်နာဖိုလိုအပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ စာချုပ် (Contract) သဘောလို့ပြောနိုင်တယ်။
•	Non-Binding Agreement ဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံး Joint Venture မှာ တဖက်ချင်းစီမညှိနှိုင်း ရန် မျှော်လင့် ထားတဲ့အရာများကို ဖော်ပြထားရုံသာ သဘောသက်သက်ပါပဲ။
#Joint Venture အမျိုးအစား ရွေးချယ်ပုံ ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါအုံးမယ်...